वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन – NauloKhabar.com
HomeUncategorizedवरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन
काठमाडाैं । वरिष्ठ संगीतकार तथा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति अम्बर गुरुङको ७९ बर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ ।
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा उपचाररत गुरुङको विहान दुइ बजेर सैंतीस मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएकाे छ ।
खानेकुरा खानेबित्तिकै वान्ता भइहाल्ने समस्या भएपछि गुरुङलाई गत सोमबार ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको थियो ।
गुरुङको उपचारमा प्रा.डा. अर्जुन कार्कीको टिम सँगै डा. बिबेक शर्मा, डा. राजु पौडेल लगायतका चिकित्सकहरू संलग्न थिए ।
लामो समयदेखी मधुमेह उच्च रक्तचाप तथा पार्किन्सन्सको उपचार गराइरहेका गुरुङलाई गतसाता एस्पिरेसन न्युमोनिया, पेट तथा अन्न नलिको रक्तश्राव (युजिआई ब्लिडिङ) को उपचारकालागि भर्ना गरिएको ग्रान्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेलाइ उधृत गर्दै ग्रान्डी अस्तालले जनाएकाे छ ।
सन् १९३८ मा भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएका गुरुङले नेपाली संगित क्षेत्रको उत्थानको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।
राष्ट्रिय गानका संगितकार गुरुङले सयौंको संख्यामा लोकप्रिय र कालजयी नेपाली गितहरुमा स्वर तथा संगित भरेका छन् ।
गुरुङका पत्नी तीन छोरा र एक छोरी छन् ।
गायन तथा संगीत सुरुवात वि.सं. २०१६ माघ कलकत्तावाट दुई गीत इम अम्बर हुँ र सम्हालेर राखबाट गीतिलेखन प्रारम्भ गरेका हुन्। सँगीतकार गुरुङले कोलकातामा पहिलोपटक सन् १९६१ मा अगमसिंह गिरीको नौ लाख तारा उदाएु बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए।